Sidii loo maleynayey wey ka yar tahay in qaado cudurka Borrelia - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sidii loo maleynayey wey ka yar tahay in qaado cudurka Borrelia
La daabacay fredag 26 juli 2013 kl 15.05
In kastoo la og yahay in afartii shilin ahiba middood ay xambaarsan tahay cudurka borrelia, ayey haddana yar tahay khatarta in cudurkaas ay dadka ka wadaqaadaan shilinta qaniinta. Waxaa sidaas lagu muujiyey daraasad qaran oo ka socota jaamacadda Linköping lagu magacaabo Stingstudien. Waxay daraasaddasi soo socotey sanooyin badan.
Natiijadii daraasadda oo ka fajacisay khubaradii soo baartay ayaa lagu sharraxay sababta uusan cudurkaasi ugu gudbin dadkoo dhan in ay ugu wacan tahay in bakteeriyada borrelia ay ku jirto xiidmada shilinta. Taas oo keenta in ay waqti qaadato inta bakteeriyadaasi ay afka ka soo gaareyso. Haddaba mar walba oo aad aragto shilin ku qaniintay oo jirka kaaga dheggan, isla markiiba ka saar si aad uga badbaaddo in aad cudurkaas qaaddo.
XAQIIQO CUDUR: BORRELIA
Cudurka Borrelia wuxuu ka dhashaa infakshan ama fasaska ay shilintu fidiso. Astaanta ugu horreysa oo lagu garto ayaa ah goobaabin cas oo ku sameysanta meeshii shilintu qaniintay iyo agagaarkeeda. Sidaas awgeed, haddii la joogo meel shilin leh, waxaa habboon in qofku taxadar dheeraad ah ku fiiriyo oogadiisa. Haddii la arko shilin jirka ama oogada ku dheggan, waa in isla markiiba laga fujiyaa. Ciddii ka shakisan in ay qaadday cudurka Borrelia waa in ay degdeg ula xiriirtaa goobaha daryeelka caafimaadka.